Valve Cover, Lost Wax Ukulingisa Izingxenye, Pump Shell - Weiwo
Izingxenye zemishini zensimbi engagqwali
izingxenye ezisele for umshini ipulazi
Aluminium noma ithusi imikhiqizo
Izingxenye elingasebenzi for umshini ukudla
Ezinye izingxenye okungajwayelekile
I-Weiwo ibilokhu iqhubeka ngokunemba machining izingxenye ezisele iminyaka eyi-10, sikhiqiza ngokuya ngemidwebo yekhasimende noma amasampula, sisebenza ngokuphelele ukuhlangabezana nezicelo zekhasimende ngalinye lonjiniyela. kubiza izindleko ukwenza imikhiqizo ehamba phambili, sinesibopho sokunikeza wonke amakhasimende ukwesekwa kwezobuchwepheshe okucwengile futhi ngemuva kwensizakalo yokuthengisa, sizoba umlingani wakho osebenza ngokufudumele endleleni yokuphila.
1.Sizokwenza ngokwezifiso ngokunembile ukufeza izidingo zenkampani yakho. I-2.Trust yinto eza kuqala, ngakho-ke sinikela ukwesekwa kwezobuchwepheshe kusengaphambili namasampula ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. 3.siqinisekisa ukuthuthuka okusheshayo nekhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana kakhulu 4.Nanxa yobuningi i-oda lakho lizophothulwa. Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi futhi ulindele ukuthi noma yikuphi ukukhathazeka kuzolungiswa. Ukwaneliseka kwakho kuyinto yethu ephambili.
Kusukela ngo-2010, Weiwo likhule sibonga master yethu ingcweti kanye ibhizinisi okuqhubekayo amaklayenti ethu wanelisekile. Siyachuma ngokuqamba okuqhubekayo okuqinisekisa ngisho nokulindelwe okuphezulu kakhulu ukuthi kungasindwa.
Isungulwe kusukela ngo-2010, sikhule endaweni yangakini futhi sinelungelo lokuthuthela emazweni omhlaba. Namuhla amanye amaklayenti ethu aphezulu ahlala eYurophu naseMelika. Sizigqaja kakhulu ngomsebenzi wethu wobungcweti futhi ngokushintshana baphatha umkhiqizo ngamunye ngenhlonipho.
ukubuka yonke imikhiqizo
Iqembu lethu onekhono oye wahlanganyela imishini yokukhiqiza iminyaka eminingi futhi sinalo olutheni ngokukhethekile ku imikhiqizo non-standard of design lobuchwepheshe, izindlela inqubo nokuphathwa izinga ...
Weiwo Inkampani yenzani yonke into esekelwe ukwethembeka inkonzo, sithunywe ukuba nazo zonke izidingo zamakhasimende, futhi sizimisele ukusebenza namakhasimende ukuthuthukisa win win futhi ikusasa eliqhakazile ...
ngokunemba imishini yethu izingxenye ezisele futhi izingxenye ziye zithunyelwa eYurophu, e-USA, Japan kanye ne-Australia, owaziwa kahle imikhiqizo yethu zendawo place.Our kabanzi isicelo nokupakisha imishini ...